Zvakagadzirwa naBhezareri naOhoriyabhi—Vashoma Vakazviona | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
BHEZARERI naOhoriyabhi vaiziva nezvekuvaka. Pavaiva varanda muIjipiti, vaifondotswa vachigadzira zvidhinha zvakawanda zvikuru zvekuti vainge vasingachadi kunzwa nezvazvo. Asi makore iwayo akanga apfuura. Vakanga vava kuzoita basa ravakapiwa naMwari reumhizha, pavakanzi vatungamirire pakuvaka tebhenekeri. (Eks. 31:1-11) Kunyange zvakadaro, vanhu vashoma chete ndivo vaizoona zvinhu zvinoshamisa zvavaizogadzira. Izvozvo zvaizoita kuti vaore mwoyo here? Zvinokosha here kuti ndiani aizoona basa ravo? Zvinokosha here kuti ndiani anoona basa raunoita?
ZVINHU ZVINOSHAMISA ZVAINGOONEKWA NEVANHU VASHOMA
Zvimwe zvinhu zvaiva mutebhenekeri zvainge zvakagadzirwa neunyanzvi chaihwo. Somuenzaniso, chimbofunga nezvemakerubhi endarama aiva pamusoro peareka yesungano. Muapostora Pauro akataura nezvawo achiti “aibwinya.” (VaH. 9:5) Fungidzira kunaka kwainge kwakaita zvinhu izvozvo zvakagadzirwa nendarama!—Eks. 37:7-9.
Kudai zvinhu zvakagadzirwa naBhezareri naOhoriyabhi zvaizowanikwa mazuva ano, zvaizenge zvakakodzera kuti zviiswe mumamiziyamu epamusoro-soro mazvaigona kuzonyatsoonekwa nevakawanda. Asi panguva yazvakagadzirwa, vanhu vangani vainyatsoona kunaka kwazvo? Makerubhi acho aiva muNzvimbo Tsvenetsvene. Saka aizongoonekwa nemupristi mukuru chete paaipindamo kamwe chete pagore, paZuva Rokuyananisira. (VaH. 9:6, 7) Naizvozvo, vanhu vashomanana ndivo vakakwanisa kuaona.
KUGUTSIKANA KUNYANGE USINGARUMBIDZWI NEVANHU
Kudai waiva Bhezareri kana kuti Ohoriyabhi uye wakashanda nesimba kugadzira zvinhu zvinoomesa mate mukanwa kudaro, waizonzwa sei pawaizoziva kuti vanhu vashomanana chete ndivo vakazviona? Mazuva ano vanhu vanonzwa sekuti vabudirira pane chimwe chinhu pavanorumbidzwa uye kuyemurwa nevamwe vavo. Izvozvo ndizvo zvinoita kuti vaone kuti vashandira zviripo. Asi vashumiri vaJehovha vane maonero akasiyana naiwayo. Kungofanana naBhezareri naOhoriyabhi, kuita zvinodiwa naJehovha uye kuziva kuti anotifarira kunoita kuti tigutsikane.
Panguva yakararama Jesu, vatungamiriri vechitendero vaiwanzopa minyengetero yekuda kushamisira. Asi Jesu akadzidzisa kuti: Nyengetera nemwoyo wose uye usava nekapfungwa kekuda kurumbidzwa nevanhu. Zvichizobatsirei? Akati, “Baba vako vanoona vari pakavanda vachakuripa.” (Mat. 6:5, 6) Saka zvinofungwa naJehovha nezveminyengetero yedu ndizvo zvinokosha kwete zvinofungwa nevanhu. Maonero ake ndiwo anoita kuti minyengetero yedu ive neukoshi. Izvi zvinoshandawo pane zvose zvatinoita pakushumira Jehovha. Kurumbidzwa nevanhu handiko kunokosha pane zvatinoita, asi chinokosha ndechekuti basa redu rinofadza Jehovha, uyo ‘anoona ari pakavanda.’
Tebhenekeri payakapera kugadzirwa, gore “rakafukidza tende rokusanganira, kubwinya kwaJehovha kukazadza tebhenekeri.” (Eks. 40:34) Izvi zvakanyatsoratidza kuti Jehovha akanga afarira basa ravo! Unofunga kuti Bhezareri naOhoriyabhi vakanzwa sei panguva iyoyo? Kunyange zvazvo mazita avo akanga asina kunyorwa pazvinhu zvavakagadzira, kuziva kuti chikomborero chaMwari chaiva pazvinhu zvose zvavakaita kunofanira kunge kwakaita kuti vafare chaizvo. (Zvir. 10:22) Makore zvaaipindana, vaifara chaizvo nekuona zvinhu zvavakagadzira zvichiramba zvichishandiswa pakushumira Jehovha. Pavachazomutswa munyika itsva, Bhezareri naOhoriyabhi vachafara pavachanzwa kuti tebhenekeri yakashandiswa pakunamata kwechokwadi kwemakore anenge 500!
Kunyange pakasava nemunhu anoona basa raunoita uchizvininipisa uye kushumira kwaunoita nemwoyo wose, Jehovha anozviona!
Mazuva ano musangano raJehovha mune vanhu vanoita basa rekugadzira makatuni, kudhirowa, kuimba, kutora mifananidzo, kushandura, uye kunyora nyaya dzinobuda mumabhuku edu. Mazita evanhu vanoita mabasa aya haataurwi. Saka zvinoita sekuti hapana ‘anoona’ basa ravo. Ndizvo zvakaitawo mabasa akawanda anoitwa muungano dzinopfuura 110 000 pasi rose. Ndiani anoona mushumiri weakaunzi achinyora zvinenge zvichidiwa pamafomu panopera mwedzi? Ndiani anenge akatarisa munyori paanogadzira mushumo weungano? Ndiani anocherechedza hama kana hanzvadzi painenge ichigadzirisa chimwe chinhu chafa paImba yoUmambo?
Bhezareri naOhoriyabhi vakafa vasina mukombe kana menduru yekuratidza kuti vaiva nyanzvi pakugadzira zvinhu uye pakuvaka. Asi vakawana mubayiro unokosha kutopfuura zvose izvi, wokufarirwa naJehovha. Tine chivimbo chekuti Jehovha akaona basa ravakaita. Dai tikatevedzera muenzaniso wavo wokuzvininipisa uye kushumira nemwoyo wose.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvinokosha Here Kuti Ndiani Anoona Basa Raunoita?